Kruthu Glass Coffee Table
Zonke kuthatha indawo ye-30,000 yezikwere, kuquka workshop imveliso, iziko lokuhlola kunye neziko lokugcina. iseti epheleleyo yezixhobo esizisebenzelayo phambili ezingaphezu kwe-120 umsebenzi yokusebenza 5 nabahloli umgangatho wocikizeko banoxanduva umgangatho imveliso. Packaging workshop maluquke indawo ye square metres 2,000, 20 abasebenzi iya kulandela ikhowudi ebezithunyelwe.
Kukho abasebenzi 20 ukulawula iziko 4,000 square nokhunye iimitha leyo zixhotyiswe kunye nenkqubo yolawulo yokugcina ezenzekelayo kunye nezixhobo umoya kunye nolawulo lobushushu eliphezulu, kwaye babe nomthamo lokuvuna imishini
I-ofisi ukuyila kunye negumbi yombhiyozo kuthatha indawo 500 yezikwere, abaphuhlisi 10 nabaqambi sidlulisela phezu amakhulu loyilo abatsha qho ngonyaka. Qho ngonyaka, ukuba bayile ikhathalogu entsha imveliso ye VIP custmers.We avuyiswa ukwamkela ODM okanye OEM oda yakho.
ADDRESS Xinzhang Ukuphuhlisa Zone, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, China 065701